‘जुन थालमा खायो सोही थाल दुलो पार्दै हिड्ने’ – निर्माता भुवन केसी – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७७, १६ असार मंगलवार १४:१२
‘जुन थालमा खायो सोही थाल दुलो पार्दै हिड्ने’ – निर्माता भुवन केसी
नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह र अभिनेता तथाअभिनेता तथा निर्माता भुवन केसीबीचको रस्सा कस्सीले हाल नेपाली चत्रचित्र क्षेत्र नै तात्तिएको छ । ठूला ब्यानरका चलचित्रका व्यक्तिहरुले आफूलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै नायिका शाहले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा एक भिडियो सार्वजनिक गरेपछि सिने क्षेत्र गर्मिलाे बनेकाे हो । पछिल्लो समय नेपोटिजमको कुरा उठिरहेका बेला शाहको यो भिडियोले झन् तात्तिएको हो । केही दिनअघि अभिनेत्री शाहले इन्स्टाग्राममा एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै ठूला ब्यानरका व्यक्तिहरुले आफूलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । पहिलो ‘डेब्यू’ फिल्मबाट नै सफल भएकी शाहले अभिनेता तथा निर्माता भुवन केसीलाई ईंगित गर्दै सार्वजनिक गरेको भिडियो बाहिरिएसंगै भुवन केसीले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिउत्तर दिएका थिए ।
भिडियो मार्फत फिल्ममा काम गर्दा त्यस फिल्मसँग सम्बन्धित व्यक्तिले याैन दुर्व्यवहार गरेको अभिनेत्री शाहले बताएकी थिइन् । उनले फिल्मको सुटिङ सेटमै अश्लील शब्दहरुले गालीसमेत गरेको कुरा भिडियोमा व्यक्त गरेकी छिन् । ‘अर्को फिल्ममा म्यानेजमेन्ट राम्रो परेन । मैले त्यस फिल्मको व्यक्तिलाई समयमा खान नपाएको, पानी पनि पिउन नपाएको भनेर म्यानेजमेन्ट नराम्रो भयो भनेर भनेको थिएँ । ती व्यक्ति एक्कासी ममाथि झम्टिन आएकी थिइन्,’ उनले भनेकी छन्, ‘अश्लील गालीहरु सुनाएकी थिइन्, मैले तीन व्यक्तिसँग काम गरें । मैले त्यो राम्रो अवसर पाएको थिएँ । तर, मैले उनीहरुसँग काम गर्दा जे देखें त्यो कुरासँग म खुशी थिइन ।’ साथै उनले यहाँ सबै नराम्रा छन् भन्न नखोजेको समेत स्पष्टोक्ति दिएकी छिन् ।
अभिनेता तथा निर्माता भुवन केसीले पनि आफूलाई दुर्व्यवहार गरेको लगाएकाे आरोपको विषयमा ‘जुन थालमा खायो सोही थाल दुलो पार्दै हिड्ने’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । यस विषयमा न्यूज २४ नेपाल डट कमले बुझ्न खोज्दा दुवै जनाको फोन उठेन । साम्राज्ञीले आफूले अहिलेसम्म ८ वटा फिल्ममा काम गरेको र ३ वटा फिल्ममा दुर्व्यवहार भोग्नु परेको बताएकी छिन् । त्यसो त निर्माता केसीले भने शाहले अहिलेसम्म पनि ‘डेब्यू’ चलिचत्रकै ब्रान्ड बेचेर चलचित्र क्षेत्रमा नाम कमाइरहेको आरोप समेत लगाएका छन् । नायिका शाह र निर्माता केसीबीचको रस्साकसीमा फिल्म लेखक एवं निर्देशक कुमार भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘जिस थाली मे खाया उसी मैं छेद किया,लाई राम्रै ट्रान्सलेट गर्नु भएछ भुवन दाईले ।’
नाम नबताउने सर्तमा एक कलाकारले भने, ‘यदि साम्रागी त्यति ठूलो दुर्व्यवहारमा परेकी थिइन् भने यत्ति लामो समयसम्म किन चुप बसिन भनेर प्रश्न गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘पढे लेखेको र उनी जस्तो सक्षम व्यक्तिले अवसरबाट चुक्न सक्छु भन्ने सोच लिएर दुर्व्यवहार लुकाएर र सहेर बस्ने हो ?’ अर्को जमातले भने फिल्म क्षेत्रमा त्यस्ता व्यवहार हुने गरेको जसका कारण नयाँ कलाकार पिडित हुने गरेको बताउँछन् । भिडियोमा केसीले आफूलाई पटक पटक गलत नियतले छोएको उनले बताएकी छिन् । उनले पहिला नै मुख खोलेको भए आफ्नो लागि फिल्म क्षेत्रको ढोका बन्द हुने सम्भावना रहेको पनि बताएकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘यो उद्योग निकै सानो छ र जोसँग शक्ति छ, उनीहरुले यो उद्योगलाई नियन्त्रण गर्न सक्छन् । उनीहरुको एकता छ, उनीहरुले तपाईंलाई यो क्षेत्रमा टिक्न दिँदैनन् । यदि मैले पहिले नै मुख खोलेको भए, मेरो लागि सम्भावनाको ढोका पहिले नै बन्द हुन्थे भनेर सम्झाए पनि ।’
यहाँ नेपालीहरुलाई लिम्पियाधुराको चिन्ता बढीरहेको छ ! तर, के वर्षा राउत बलिउडको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?
चर्चित हाँस्य टेलिश्रृङ्खला भद्रगोलका ‘विलासे’ लाई कोरोना संक्रमण !
PREVIOUS Previous post: नेकपा को स्थायी कमिटी बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज पनि जारी
NEXT Next post: टिचिङ अस्पतालमा उपचाररत ४५ दिनको शिशुमा कोरोना पुष्टि